Ireo fifanarahana efatra | Martech Zone
Ireo fifanarahana efatra
Alatsinainy, 4 Jona, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany aho niresaka tamin'ny namako, Jules. Jules dia nampita fahendrena vitsivitsy avy amin'ilay boky, The Four Agreements, nataon'i Don Miguel Ruiz & Don Jose Luis Ruiz.
Toy ny ankamaroan'ny torohevitra, dia fotokevitra tsara io, saingy sarotra ampiharina. Ny fiainantsika andavanandro dia toa manosika ny fahafahantsika mitazona zavatra toa an'io tampon'ny saina io. Angamba satria efatra fotsiny izy io dia vitantsika izany!
1. Aza diso amin'ny teninao
Mitenena amin'ny fahamendrehana. Aza miteny afa-tsy ny tianao holazaina. Aza mampiasa ny teny hanoherana ny tenanao na hifosa amin'ny hafa. Ampiasao amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fitiavana ny herin'ny teninao.
2. Aza maka zavatra manokana
Tsy misy olona hafa noho ianao. Izay lazain'ny olona sy ataony dia fanehoana ny tena zava-misy marina, ny nofiny manokana. Rehefa tsy salama amin'ny hevitra sy ny fihetsika ataon'ny hafa ianao, dia tsy ho voan'ny fijaliana tsy misy ilana azy.
3. Aza manao vinavina
Mitadiava herim-po hametrahana fanontaniana ary maneho izay tena irinao. Miresaha amin'ny hafa mazava tsara araka izay azonao atao mba hisorohana ny tsy fifankahazoana, ny alahelo ary ny tantara. Amin'izao fifanarahana izao dia afaka manova tanteraka ny fiainanao ianao.
4. Ataovy foana izay tsara indrindra vitanao
Ny tsara indrindra vitanao dia ny hiova tsindraindray; tsy hitovy izany rehefa salama fa mifanohitra amin'ny marary. Na izany na tsy toe-javatra mitranga dia ataovy tsotra izay farany vitanao mba hialanao amin'ny fitsaranao tena, ny fanararaotana tena ary ny neninao
Torohevitra mahafinaritra. Heveriko fa nahazo ny # 1 aho, # 4 saika teo… # 2 Tsy maninona aho, satria matoky tena aho. Mila asa kely ny # 3! Misaotra an'i Jules nampita an'ity! Manana asa tsy maintsy atao aho.
PHP: Voafidy ve i SimpleXML?
Antsoy aho rehefa any ivelan'ny Beta ianao, Google Gears!
5 Jiona 2007 à 6:29
Torohevitra tsara, Doug. Ny toro-hevitra mahasoa indrindra momba ny fitondran-tena dia tsotra, ary sarotra ny lazainao.
5 Jiona 2007 à 7:20
Doug. Toa boky mahaliana. Efa namaky azy ve ianao? Mendrika ny vidin'ny fidirana sa nofintininao ny firavaka avy amin'izany eto amin'ny lahatsoratrao?
Toetra efatra tokony hiezahana. Ary, avy eo mifandray mivantana amin'ny fitorahana bilaogy.
5 Jiona 2007 à 8:05
Efa imbetsaka aho no namaky ity boky ity ary niova ny fiainana voalohany, nanamafy ny fiainana isaky ny hafa. Na dia tsotra aza ireo fitsipika ireo, ny fampiharana marina (lalina) eo amin'ny fiainantsika manokana sy eo amin'ny fiainantsika dia mitaky fifehezana sy faniriana mitohy amin'ny fanatsarana ny tena. Ankehitriny, raha toa ka miahiahy bebe kokoa momba ny lafiny manokana aho ary ity bilaogin'i Doug ity dia miresaka momba ny lafiny matihanina/teknika kokoa amin'ny fiainana, ny faribolan'ny fitaomana antsika dia lehibe araka izay irintsika. Ireo fifanarahana efatra dia hitarina ao anatin'ilay boky ary manazava hevitra lalina kokoa ho an'ny fifanarahana tsirairay izany.
Somary misintona kely ny fiandohan'ny boky, fa rehefa tafiditra ao anatin'ny “henany” ao aminy izy, dia tohina aho… ary niova. Raha afaka mampihatra ireo fitsipika ireo ny tsirairay dia isika te hanova izao tontolo izao.
5 Jiona 2007 à 8:32
Tena ao anatin'ny lisitra fohy hovakiako boky io ry Dawud! Tsy nieritreritra momba ny fitorahana bilaogy mihitsy aho (duh!), fa marina ny teninao – torohevitra tsara ho an'ny bilaogera izany!
Jun 5, 2007 ao amin'ny 5: 23 PM
hmm….mety tsy maintsy miasa mafy aho amin'ny teboka # 2 🙁
Jun 5, 2007 ao amin'ny 9: 25 PM
Marina fa sarotra be izany. Mety hanampy ny mieritreritra izany fomba izany. Tsy misy olona afaka manao anao ho zavatra tsy misy anao. Noho izany, raha miantso ahy anarana ianao na milaza zavatra ratsy momba ny tenako, dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fijeriko ny tenako izany - RAHA tsy manana ahiahy aho amin'ny maha-izy ahy. Ao no mipetraka ny olana. Avelantsika hisy fiantraikany amin'ny fomba fiheverantsika ny tenantsika ny fiheveran'ny hafa antsika, fa tsy ny hanaiky ny tenantsika fotsiny na hanova ny zavatra tsy tiantsika fotsiny. Mazàna ny zavatra inoanao no misy vokany. Mieritrereta zavatra tsara momba ny tenanao dia ho tianao ny tenanao; mieritreritra zavatra négatif dia tsy ho tianao ny tenanao.
Eny, voampanga ho Pollyanna'ish aho....nefa izany no antony mitarika eo amin'ny fiainako ary manampy ahy tsara, indrindra amin'izao fotoana izao. 🙂
6 Jiona 2007 à 4:18
torohevitra tsara jule 🙂
Mora ny milaza zavatra ratsy amin'ny Internet. Ampidiro ao amin'ny boaty fanehoan-kevitra fotsiny izay tianao… ..
Tsy mieritreritra akory ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ilay bilaogera ny olona…. 🙁
“Mieritrereta zavatra tsara momba ny tenanao dia ho tianao ny tenanao; Mieritrereta zavatra ratsy dia tsy ho tianao ny tenanao.
Tena hanaraka ny torohevitrao aho 🙂
6 Jiona 2007 à 7:33
Tsy afaka manoro ity boky ity aho - mora vakina izy io, ary mendrika ny hamaky tsindraindray mba hamerenana ny sainao. Ity boky ity dia nomena ahy taona maro lasa izay rehefa nandalo "paty henjana" aho ary nanampy ahy hitsangana indray. #2 Aza mandray na inona na inona ho an'ny tena manokana dia nisy fiantraikany lehibe indrindra tamiko tamin'ny fanampiana ny fahatsapako ny tenako.
Tolo-kevitra tsara, Doug!
Wild Birds Tsy voafetra
Jolay 13, 2007 amin'ny 1:55 PM
Raha ny marina, raha mandika ny fifanarahana #2 na #3 ianao dia tsy ho Impeccable amin'ny teninao (fifanarahana #1).
Raha maka zavatra manokana ianao dia manao fanehoan-kevitra mifanohitra amin'ny tenanao ara-pihetseham-po. Tsy hoe impeccable izany. Raha toa ianao ka manao (mamorona ao an-tsainao) vinavina izay mitarika ho amin'ny tsy firindrana dia tsy hoe tsy mety koa ianao.
Ny fanehoana tsy misy diso ny teninao koa dia mitaky ny hanaovanao vinavina tsy misy isalasalana, ary ny tsy fanaovanao fanehoan-kevitra izay mahatonga anao handray zavatra manokana.
Tamin'ny famakiana voalohany dia hita fa mora kokoa noho ny hafa ny Being Impeccable. Rehefa mandalina ireo teboka tsara ianao dia hitanao fa ny fifanarahana velona #2,3, ary 4 dia mitarika anao hahatratra ny tsy fahampiana.
Ny antsipiriany bebe kokoa momba izany ao amin'ny http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/
Mirary anao ho tsara vintana,